Abavelisi bePETG kunye nababoneleli - iTshayina yePETG mveliso
I-0.5 oz (15ml) ecacileyo ibhotile ye-PETG eyi-oval dropper nge-9-400 entanyeni
Iibhotile zethu zokulahla i-0.5oz / 15ml zenziwe ngezinto zePETG. Ibhotile yokulahla ine-oval kwaye iflethi. Iiplastiki zokucinezela iibhotile zedrophu zibonisa ukuba inokuvavanywa okanye inyangwe ngokuncamathela. I-logo eyenziwe yinkampani yakho inokwenziwa kwibhotile ye-dropper, ukwenzela ukuphucula imveliso yenkampani yakho. isebenzisa ikhava yokubopha kunye neplagi yokutywina ukuqinisekisa ukuba ukutywinwa kwemveliso okungu-100% kungasetyenziselwa ukupakisha i-eyedrops, ukupakisha kweoyile kubalulekile, iibhotile zokupakisha iisigarethi zombane. Inesitya sebhotile sokwehlisa.
I-0.5 oz (15ml) icacile ibhotile ye-PETG ye-octagonal dropper enentambo eyi-10
Iibhotile zethu zokulahla i-0.5oz / 15ml zenziwe ngezinto zePETG. Iibhotile zeplastiki zamathontsi wamehlo zi-octagonal kwaye zithe tyaba. Ibhotile yedrophu ibonisa ukuba inokuvavanywa okanye inyangwe ngokuncamathela. I-logo eyenziwe yinkampani yakho inokwenziwa kwibhotile yeplastiki yokunyusa isiphumo senkampani yakho.Ubume bebhotile yeplastikhi bumbumbene, ikunike amava okuziva ngcono kunye neshelfu yokubonisa isigqubuthelo. kunye neplagi etywinayo yokuqinisekisa ukuba imveliso iyi-100% yokutywina.Ingasetyenziselwa ukupakisha i-eyedrops, ukupakisha ioyile kubalulekile, iibhotile zokupakisha iisigarethi zombane.